Hi-Weed! 7 Siyaabood Oo Loogu Dabaaldego Maalinta Barakaysan ee Halloween Xashiishad • Dawooyinka Inc.eu
Hi-Weed! 7 siyaabood oo loogu dabaaldego Maalinta farxadda leh ee Halloween berri xashiishad
30 Oktoobar 2020
Dabcan, waxba kama garaacaan Halloween Hallo-Weed cajiib ah berri! Aynu eegno 7 dariiqo oo si masuuliyad leh loogu dabaaldego Halloween oo leh xashiishad.
1 Qaado oo keydso xashiishadda la cuni karo si masuuliyad leh
2 Weydii waxyaabaha ku saabsan cuntadaada
3 Hoos u dhig oo gaabi
4 Cabitaanka iyo Xashiishadda
5 Anshaxa marka la cabayo xashiishadda
6 Qiiqa badbaadada
7 HA wadin baabuurka adigoo sareeya. Marna.
7.1 Farxad Wanaagsan - Weed at Halloween!
Waad ku raaxeysan kartaa, ku raaxeysan kartaa tan cunnooyinka la cuno, oo waxaad yeelan kartaa habeen cabsi leh talooyin dhowr ah oo ammaan ah oo aan rajeyneyno inaad qadarin doontid.
Haddii aad ku sii jirto ama aad baxdo inta lagu jiro cudurkan faafa ee COVID-19, Halloween waa mid ka mid ah xilliyada xiisaha badan ee sanadka!
U labbisashada sida qof kasta oo aad rabto inaad noqotaa waa hab fiican oo lagu helo hal-abuur, dareemo galmo, ama aad xoogaa fiiro gaar ah u hesho dhar madadaalo ah ama khatar leh!
Qaado oo keydso xashiishadda la cuni karo si masuuliyad leh
Haddii aad martigelinayso kulan (taas oo u hoggaansanta sharciyada corona), waxaad dareemi kartaa inaad diyaarinayso qayb ka mid ah bunni-ku-shubmay bunni iyo nacnacyada Halloween.
Ku keydi xashiishadda la cuni karo oo calaamadee si habboon si looga fogaado jahwareer ama xaalado aan fiicnayn.
Waxaad awoodi kartaa edibles ku haay sanduuqa la cuni karo ee la cuno ama weelasha cunugga u adkeysan kara.
Sidoo kale ka taxaddar xashiishadda & cunnooyinka inta lagu jiro Halloween
Weydii waxyaabaha ku saabsan cuntadaada
Haddii aad u socoto xaflad yar oo ku saabsan Halloween ama khiyaano-ama-ku-daweynta weelka guryaha saaxiibbada, weydii waxa lagu daaweeyo ee ay u adeegaan.
Haddii aadan rabin inaad cuntid cannas cunnada, kaliya u sheeg saaxiibbadaa. Haddii aad rabto inaad dhadhamiso xashiishka la cuni karo, hubi qiyaasta si aad u xakamayso kanaga sarreeya, u baashaal oo aad had iyo jeer u dareento ammaan.
Hoos u dhig oo gaabi
Waxay u badan tahay inaad horay u maqashay weedhan, waxaana ugu fiican inaad xasuusato oo aad ku celiso: si tartiib ah u dhis!
Had iyo jeer way fiican tahay in lagu bilaabo qiyaasta ugu hooseysa oo laga badiyo halkaas si loo gaaro heerka sare ee aad rabto. Had iyo jeer tan ku samee tallaabooyin aad u yar, oo wanaag dareemaya iyo halka aad ku ilaalinaysid xakameyn buuxda.
Xusuusnow, waxay qaadan kartaa meel kasta oo 30 daqiiqo ilaa 1 saac ah inaad ku bilowdo dareemida noocyada cunnooyinka xashiishka, sidaa darteed fiiro gaar ah u yeelo!
Cabitaanka iyo Xashiishadda
Markaad ka booddo xisbi ilaa xisbi, ama aad abaabusho isku imaatin ganja ah, waxaa jiri doona iskutallaab.
Is-tallaabintu waa markaad isku dhex qasanto buunshaha iyo burooyinkeeda.
Aalkolada iyo xashiishadda badanaa waxay ku siinayaan awood sare.
Marka aalkoladu ku jirto nidaamkaaga, waxay sare u qaadi kartaa saameynta marijuana iyadoo la furayo halbowlayaashaaga iyo inbadan THC in la duubo.
Dadka qaar ma xamili karaan noocan sare, markaa had iyo jeer gaabis noqo oo si fudud u qaado.
Haddii aad rabto inaad wanaag dareento oo aad ku raaxaysato isku darka marijuana, isku day Is biirsaday CBD. Waxaad dareemi doontaa deganaan iyo qabow intaad ku raaxeysaneyso is biirsaday fiican!
Anshaxa marka la cabayo xashiishadda
Ma rabtaa inaad sigaar cabto? Had iyo jeer waa su'aal jilicsan oo lagu weydiiyo meel kasta oo aad tagto.
Naftaada iyo qof kasta u samee wanaag oo hubi aadaabta iyo xeerarka ku saabsan sigaarka. Tusaale ahaan, waa inaad dabcan sidoo kale ka warqabtaa joogitaanka carruurta iyo taxaddarrada ku habboon ee COVID.
Kuma khaldami kartid haddii aad keento wax kugu filan inaad sigaar la cabto martida kale. Wadaaggu waa daryeel!
Ma jiraan laba qof oo yeelan doona isla heerka saxda ah, waana sababta ay u fiicantahay in la hubiyo inaad leedahay saaxiibo wanaagsan oo hubin doona in haddii wax la cuni karo ay kulasocdaan hoos, waxaad u haysaa iyaga taageero.
Haddii qof uu leeyahay falcelin xun ama aad u xoog badan oo ku saabsan cunnooyinkaaga Halloween, ku hay biyo ku waraabi, ka dhig iyaga inuu dareemo ammaan iyo raaxo, oo si joogto ah ugu kalsoonow.
HA wadin baabuurka adigoo sareeya. Marna.
Haddii ay jirto hal ballan iyo sharci oo ah inaad had iyo jeer ku dheggan tahay - oo aad u gudbiso kuwa kale: waligaa ha cabin xashiish iyo wadin isla waqtigaas!
In kasta oo xashiishadda ay sharci ka tahay dalal iyo gobollo badan oo laga yaabo inaadan dareemin inay adiga wax ku yeelaneyso, uma qalanto halista naftaada ama dadka kaleba. Sidaa darteed, waxna ha u biimeynin oo ammaan u aad.
U wac Uber si aad u nasato, u kala baxdo, u baashaasho oo aanad waligaa uga walwalin arrintaas!
Farxad Wanaagsan - Weed at Halloween!
Ilaha waxaa ka mid ah Benzinga (EN), Cannadish (EN), MSN (EN)
Spherex waxay soo saartaa biyaha cannabis
Shirkadda 'Spherex' - oo caan ku ah wax soo saarka vape - waxay biloowdaa biyo xashiish dhalaalaya iyadoo ku hoos jirta magaca Phyx ee ...